Haiti: Mananontanona ny herisetra amin’ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2011 18:30 GMT
Raha niomana hanomboka ny fampielezan-kevitra tany Mirebalais ny Talata 15 Martsa 2011 izao i Mirlande Manigat izay mpifaninana ho filoham-pirenena Haitiana sady mpampianatra lalàna, dia nisy nitora-bato [fr] ireo heverina ho mpanohana an'i Michel Martelly izany ireo mpanara-dia azy, izay nitarika sahotaka ka niafara tamin'ny fitifirana sy faharatrana.
Ramatoa Manigat, tahaka ny fiantsoan'ireo mpanohana azy sy ireo mpianany marobe taloha, nitoraka tweet ny fifanafihana taoriana kelin'ny nitrangany:
@mirlandemanigat: Mbola nisy nanafika ihany ny tobinay aty amin'ny “Central Plateu” androany.
Toy izany koa i Jacquie Charles ao amin'ny Miami Herald :
@jacquiecharles: ny fanentana #Manigat dia miteny nisy nanafika ny mpanara-dia azy raha nihezaka hanatontosa fivoriana tany Mirebalais Nalana teny an-toerana izy. #elections #Haiti
Ilay teknisianin-ny Barikad Crew naratra. Sary nalaina tany amin-i Sitwayen Pou Mirlande @Zogrann.
Manigat, antoko afovoany sy mpanoratra ireo boky mirakitra ny tantaran'ireo zon'ny vehivavy Haisiana hatramin'ny 1804, dia tsy maintsy nesorina teny amin'ny sehatra [fr] ary dia noravana raha tsy mbola nanomboka akory ny fivoriana. Nisy teknisianin'ny vondrona mpiangaly rap malaza Barikad Crew iray naratra (jereo eto an-kavanana).
Mitety ny firenena miaraka amin'i Manigat ny Barikad Crew mba hanampy azy hisarika ny tanora Haisiana izay maro amin'ny fifidianana.
Fotoana fohy taorian'ny zava-nitranga, niresaka mivantana tao amin'ny Radio Kiskeya any Port-au-Prince, renivohitr'i Haity i Mirlande Manigat [fr]:
Manameloka ireo “fanafihana misesisesy” nataon'ireo mpanohana ny mpifaninana aminy nandritra ny fijanonany hanao fanentanana samy hafa i Mirlande Manigat. Milaza ireo zava-nitranga ho tsy azo ekena izy ary nanindry fa nikotaba amin'ny tsy zakan'ny sofina nandritra ny 45 minitra ireo mpitabataba tany Mirebalais. Nitaraina ihany koa izy amin'ny fandalovan'ny mpitandro filaminana izay tsy nanao na inona na inona akory manoloana ireo mpanafika. Mikasa ny hanohy ny fanentanany hatramin'ny farany ity mpifaninana ity. Afa-po amin'ny fanentanany tany amin'ny Faritra Afovoany manontolo sy ireo notsidihany [tanàna maro mbola miampy an'i Mirebalais] izy.
Ao amin'ny Twitter, nandinika ireo fanafihana rehetra nahazo ireo mpanohana azy i Manigat [fr] hatramin'ny fanentanany manohitra ny mpifaninana aminy Michel Martelly, nanomboka ny 17 Febroary 2011: nisy lehilahy tanora iray maty tany Cité Soleil fotoana fohy alohan'ny nahatongavany teny amin'ny fivoriana, olona telo mpametaka ny peta-drindriny no nampijaliana sy novonoina, nisy ireo tora-bato nandrintra ny fivoriana tany Bel-Air, ary mpanohana roa no nahiditra hopitaly taorian'ny fidarohana azy ireo nandritra ny fivoriana tany Cap-Haïtien ny Alakamisy lasa teo.
Kanefa toa tahaka ny tsy mampitahotra ny mpifidy ireo fahasimbana, nifoha ireo Haisiana androany maraina ary nahalala fa maty voatifitra omaly alina ilay mpanao politika Michel St-Obin avy ao amin'ny sehatra OPL nanohana an'i Manigat.
Jean-Junior Joseph, mpanao gazety miandraikitra an'i Mirlande, nanamarina ireo vaovao ireo ao amin'ny Twitter:
@jeanjuniorj: Michel Saint-Obin, mpanohana an'i Mirlande MANIGAT’ dia maty voatifitra tany Port-de-Paix omaly.
Na eo aza ity fivoaran'ny toe-javatra mampiahiahy ity, nahazo fanohanana avy amin'ny loholona taloha Lavalas Senator Rudy Herivaux i Manigat, izay niantso ireo mpanara-dia an'i Lavalas mba hifidy azy araka izay tratra. (Ao amin'ny ankolafy Aristide i Lavalas.)
Voarohirohy amin'ity herisetra ity ny mpitandro filaminana
Tao anatin'ny fanadihadiana azy tao amin'ny Radio Kiskeya, nanonona manokana ny tsy fandraisan'ireo mpitandro filaminana andraikitra tany Mirebalais Ramatoa Manigat. Mety ho nanazava ny zava-dehibe tamin'ity raharaha ity izy: ny anjara asan'ireo mpitandro filaminana amin'ny herisetra hatramin'izao. Satria tokoa, mpitandro filaminana daholo ireo fito lahy voasambotra noho ny famonoana ireo telo lahy mpametaka ny peta-drindrin'i Manigat tamin'ny herinandro lasa, araka ny fanamarinan'i Jacquie Charles ao amin'ny Miami Herald:
@jacquiecharles: mpitandro filaminana 7 no voasambotra noho ny fahafatesan'ireo mpanohana telo an'i #Manigat izay hita maty voatifitra taorian'ny fisamborana azy ireo. #elections #haiti
Ny Sabotsy lasa teo, namatotra ireo mpitandro filaminana amin'ity raharaha ity ireo manam-pahaizana ao amin'ny adihevitra ao amin'ny radio Ranmase [fr], manamarika fa ny lehiben'ny ankolafin'i Martelly tany Avaratra Atsinanana dia mpikambana ao amin'ny polisy nasionaly ary namporisika ny fanakorontanana ny fivoriana tany Le Cap ny Alakamisy teo ihany koa ny polisy izay namparatra ny maro amin'ny mpanohana an'i Manigat [fr].
Ny fihetsik'ireo mpitoraka Tweets
Na dia tsy dia betsaka aza no voalaza momba ny fitsabatsabahan'ny mpitandro filaminana ao anatin'ny gazety an-tsoratra sy tao amin'ny twitter, manana zavatra maro ambara ireo”mpitoraka tweets” mikasika ny fanafihana tany Mirebalais ny Talata.
TwitJako, mpanao hatsikana-tweet iray malaza izay manana mpanaraka 28,000, naneso ireo mpifaninara roa ireo hatramin'izao, dia nanapaka ny tsy fiandaniany:
@twitjako: Te-hangataka ny mpiara-miasa amin'i Martelly aho hanotra azy tsara… Tena marobe ny herisetra mitranga ry zalahy. Manendaka ireo sary ny olona, mandrava fivoriana. Mba COOL!
@Sonoude, izay manaingo ny sariny amin'ilay Twibbon'i Martelly dia toa tsy mino:
@Sonoude: Tena mahay mitora-bato mihitsy ireo Haisiana. Raha tena te-hampitrosona amin'ny tany an-dRtoa Manigat marina ry zareo, dia efa ela no nanao izany. Za-Faady.
@SeTawTaw, mpanohana an'i Manigat, tsy taitra (kr) tamin'ny herin'ny sakana tany Mirebalais enti-manohitra an'i Manigat satria, hoy ilay mpitoraka tweet, “faritry ny mpanohana an'i Duvalier ny Mibalais ” ary “mahatsiaro ho voarahona izy ireo”:
Tsy mahagaga raha tsy mahazaka an'i Martelly ry zareo ary maherisetra amin'i Manigat!
Ny hafa, tahaka an'i @ZoGrann, manontany tena mikasika ireo fifandraisana misy eo amin'ny herisetra sy ny filazan'i Martelly tsy ela akory izay fa “eny an-dalambe” no hahazoana ny fandresena:
@ZoGrann: Mari-pototra ny zava-drehetra: mivahavaha ny vondron'i Michel François Martelly/ miteny fa ny arabe no manan-danja noho ny vatom-pifidianana/ mpanohana 3- an'i Manigat no maty. #Haiti
Mandritra izay, manako ny fihetseham-pon'i Mirlande Manigat sy ireo Haisiana maro, ny masoivohon'ny Radio France International (RFI) Amelie Barondiz ni-tweet:
@ameliebaron: @mirlandemanigat dia mampitandrina fa ” misy milisy mavokely (lokon'i Martelly) miofana & izany no fiandohan'ny didy jadona, miaraka amin'ny antoko-miaramilan'ny tanora” #haiti
Tsy nahasahy nipoitra i Martelly tamin'ilay adihevitra faharoa tokony natao omaly, taorian'ny nandrahonany mpanao gazety roa izay nanontany momba ireo trosa tsy voaloany tany Miami nandritra ilay andiany voaloha natao ny 9 Martsa 2011. Melohan'ireo fikambanan'ny mpanao gazety Haisiana io fandrahonana io.
Maro no manontany tena raha mety hisy mpanoratra tantara iray afaka hitondra vokatra tsara momba ny fifidianana ao Haiti, nokasaina natao ny Alahady. Ny mpitondra tsy refesi-mandidy teo aloha Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier dia niverina tany Haiti tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, izay fiverenany voalohany hatramin'ny 1986.
Ny filoha teo aloha Jean-Bertrand Aristide, ankafizin'olona avy ao amin'ny antoko ankavia, dia anatina fiaramanidina hiverina any Haiti raha araka ny tatitra taorian'ny 7 taona nahasesitany azy tany Afrika Atsimo, taorian'ny fanonganam-panjakana izay heverina ho nandraisan'i Martelly, mpihira malaza manao sarimbavy sy i Duvalier ary ny antoko ankavanana anjara mavitrika.